Wiilka Ninkii Beeran Jiray Miraha Strawberry-ga Oo Qarka U Saaran Inuu Noqdo Ra'iisul Wasaaraha Japan
Wednesday September 16, 2020 - 08:37:46 in Wararka by Burco Office 2
2005, Ra'iisul Wasaare Junichiro Koizumi ayaa waxa uu ka dhigay wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo warbaahinta.
Xiriirka kala dhaxeeyay Mr Abe ayaa sii scodai markii markii dambe uu xilka ra'iisul wasaaraha ku soo laabtay 2012, markaas oo uu magacaabay xilka awoodda badan ee Xoghayaha Golaha Wasiirrada.
Siddeedii sanadood ee la soo dhaafay, "gacanta midig" ee Mr Abe ayaa saaxadda saarnaa oo waxa uu maalintiiba laba jeer warbaahinta siin jiray xogta dalka waxa uuna magac ku sameeyay maamulidda hannaanka maamul ee culus ee dalka Japan.
Maadaama uu ahaa wajiga maamulka, waxaa mas'uul looga dhigay inuu daahfuro boqortooyada cusub sanadkii 2019, markaas oo uu xaqiijiyay in Boqor Akihito uu xilka ka degayo.
Maamulka cusub ee uu hogaamin doono Boqor Naruhito ayaa waxaa loogu yeeri doonaa Reiwa - taas oo macnaheedu yahay "Is-afgaradka wanaagsa" - ayuu Mr Suga ku dhawaaqay, arrintaas oo horseedday in loo bixiyo naanaysta ah "Adeer Reiwa".
Iyadoo taageeradaas uu haysto, ayuu Mr Suga waxa uu taariikh sameeyay 14-kii Sibteembar markii uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee Xisbiga LDP kaas oo aanan ka tirsanayn qaybaha xisbiga ama qoysaska siyaasadda lagu yaqaanay, taas oo dhabbaha u xaaraysa u caleema-saarkiisa rasmiga ah ee xilka ra'iisul wasaaraha.